नसोचेको घ’टना घट्यो रौतहटमा !! मृ’त्युपछि यु’वतीको श व प्रेमीको घरमा « गोर्खाली खबर डटकम
नसोचेको घ’टना घट्यो रौतहटमा !! मृ’त्युपछि यु’वतीको श व प्रेमीको घरमा
रौतहटमा बुधवार साँझ शं’कास्पद मृ’त्यु भएको युवतीको प्रेम सम्बन्धका कारण ज्या न गएको खुलेको छ । युवतीको मृ’त्युपछि प्र हरीले उनका काका र काकीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका वडा नं.४ छतौना टोल बस्ने लाल महम्मद धुनियाकीे १७ वर्षीया छोरी रोबिना मन्सुरीको श व बुधबार साँझ फे ला परेको थियो ।
युवतीको स्थानीय जुनैद कवारीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको र युवतीको परिवारलाई सो सम्बन्ध स्वीकार्य नभएको कारण दुवै परिवारमा पटक पटक वि वादसमेत भएको प्र हरीले जनाएको छ । मृ तक रोबिना र जुनैदले पारिवारिक अ’वरोधका बीच पनि प्रेम सम्बन्धलाई नि रन्तरता दिइरहेको थिए ।
परिवारजनका सदस्यहरुले युवतीको श व बो केर युवकको घरमा पुर्‍याउँदै गरेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठले बताए । युवतीको शव यु वकको घरमा राखेर फ’साउन खोजेको प्र’हरीको प्रारम्भिक अ’नुसन्धानले देखाएको डीएसपी श्रेष्ठले बताए ।
युवतीका काकाहरु फुल महम्मद, लाल महम्मद, नसरुद्धिन मन्सुरी, काकी सहनाज मन्सुरीले श वलाई बो’केर जुनैद कवारीको घरमा लगेर राखेका थिए । जुनैदको घरका सदस्य बाहिर रहेको बेला युवतीका परिवारजनले श व जुनैद कवारीको भाउजु बस्ने कोठामा राखेको प्र हरीले जनाएको छ ।
मृ’तक युवतीको घाँ टीमा डो रीको जस्तो डो ब देखिएपछि ह’त्या वा आ त्मह त्या के हो भन्ने खुल्न बाँकी रहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताए । अ नुसन्धानका क्रममा मृ’तक युवतीका काका फुल महम्मद मन्सुरी र काकी सहनाज मन्सुरीलाई निय न्त्रणमा लिएको छ । मृ तकको श’व पोष्ट’मार्टमका लागि वीरगञ्जको नारायणी अ’स्पताल पठाइएको छ । फोटो गुगलबाट न्युज लागि साभार गरिएको हो।